Ukubhaka ngaphandle kukaflawa - Bayede News
Ngike ngaba nengxoxo nomunye obalule ukuthi unyaka wezi-2020 kube unyaka omude kunayo yonke empilweni yakhe, ngathi awupheli.
Lokhu, ngokusho kwakhe kwenziwe yizinselelo yena, njengeningi, abhekane nazo kulo nyaka. Abaningi bashiywe ngabathandiweyo babo, abanye balahlekelwa yimisebenzi kanti abanye balale ezibhedlela ngenxa yokuhlaselwa ukugula.
Impela nakuba zibe ningi izinselelo kulo nyaka, bukhona nokho nobuhle esibubonile.
Abaningi bathole ithuba lokuhlala nemindeni yabo nokuholele ekutheni bafunde lukhulu ngamalungu emindeni yabo. Baningi abathole ithuba lokuchitha isikhathi esikhethekile emaziko abo bepheka bebhaka nokuyinto ebingenzeki kaningi ngaphambilini. Baningi abavundulule amakhono abebengazi nokuthi banawo okupheka nokubhaka. Impela, nakuba ziningi izinselelo empilweni, kuyohlale kukhona okuhle esingakuthokozela.
Singena enyangeni entsha uMfumfu nokusho ukuthi sesisalelwe izinyanga ezingaphansi nje kwezintathu onyakeni wezi-2020. Emva kwenyanga uMandulo, nalapho kade sigxile khona ekudleni kwesintu, ake sibhake.
Ngenkathi ngisacabanga ukuthi konje iyiphi indlelakwenza esingacobelelana ngayo kwesanamuhla isiqephu, ngikhumbule ukuthi sengivamile ukubona ezinkundlelni zokuxhumana ukuthi iningi labantu lizibandakanye ezindleleni zokudla ezikhethekile ngezizathu ezahlukahlukene.
Kuvamisile ukuthi uma sicabanga ngokubhaka, isithako esifika kuqala emqondweni kube uflawa. Iqiniso ukuthi seziningi kakhulu izindlelakwenza zokubhaka ezingabandakanyi uflawa. Lo mkhuba ubukeka uba nesasasa kakhulu muva nje, ikakhulu kulabo abalandela izindlela zokudla ezikhethekile. Iningi labantu abalandela amadayethi afana neGrain-free, iKeto, iPaelo namanye ahlobene nalawa, bavame ukungawudli uflawa.
Abanye nokho abawudli uflawa ngenxa yezizathu ezithinta ezempilo, njengama-allergy. Nokho-ke, abanye bake bazithole besesimweni lapho befisa ukubhaka kodwa bathole ukuthi abanawo uflawa owanele ekhabetheni. Kwesanamuhla isiqephu sizocobelelana ngendlelakwenza yekhekhe likashokoledi elingenaflawa.
Ikhekhe likashokoledi elingenaflawa
Ama-115g ebhotelwa elingenasawoti, nelingaphumi efrijini
Ama-170g kashokoledi owuthandayo oqotshwe waba zicucu (qiniseka ukuthi kungabi onoshukela ngoba usazofaka ushukela)
Ama-120g kashukela omhlophe
Amathispuni amabili (2) kaphawuda we- Espresso
Ithispuni elilodwa nengxenye (1&1/2) levanilla essence
Amaqanda amakhulu amane (4) angaphumi efrijini
U-28g kaphawuda weCocoa (ongenashukela)
Ingcosana kasawoti ezohlanganisa izithako
Ingxenye yethispuni (1/2) kabaking powder
Izithako (zikakhilimu wokushubisa)
Ithispuni elilodwa (1) likaphawuda we-Espresso
Ithispuni elilodwa (1) lamanzi afudumele
Inkomishi eyodwa (1) kakhilimu
Izipuni zokudla ezimbili nengxenye (2&1/2) zikashukela omhlophe
Isipuni sokudla esisodwa (1) sikaphawuda weCocoa
Izithelo ezithandwa nguwena zokuhlobisa (kungaba noma yiluphi uhlobo lwamaBerries)
Lungisa ipani lokubhaka eliyindilinga ngokwendlala iphepha lokubhaka bese ulininda ngebhotela. Siza ungasebenzisi iNon-stick Spray ngoba lizonamathela ikhekhe lapho selikhishwa.
Endishini elungele ukungena kumicrowave, faka ibhotela eliqotshiwe (lokhu kuzosiza ekutheni lincibilike kalula).
Faka ushokoledi oqotshiwe waba zicucu.
Faka indishi kumicrowave ubeke kumizuzwana engamashumi amabili (20) bese uyakhipha uhlanganise ngemfologo, uphinde ubuyisele kumicrowave. Phindaphinda lokhu lize lincibilike ngokuphelele ibhotela noshokoledi. Qiniseka ukuthi azikho izigaxa.
Beka ingxube yebhotela ngaphandle ukuze ithi ukuphola, cishe imizuzu emithathu.
Uma isithe ukuphola, faka ushukela, uphawuda we-Espresso kanye neVanilla Essence bese uhlanganisa ngokuphelele.
Faka amaqanda uphinde uhlanganise.
Uzoqaphela ukuthi inhlama yakho ngathi yomile (njengeyamaBrownies). Kungakwethusi lokhu, kufanele ibe njalo.
Faka uphawda weCocoa kanye neBaking Powder.
Thela inhlama yakho epanini lokubhaka
Kubalulekile lokhu okulandelayo: Thela amanzi abilayo epanini lokubhaka elikhulu ngokwanele ukuthi ipani obhaka ngalo lingangena kulona (kuphinde kusale isikhala emaceleni), bese ufaka ipani elinenhlama. Lokhu kusiza ekutheni kube nomusi kuhhavini. Qinisekisa ukuthi amanzi angabi maningi kakhulu aze angene ekhekheni.
Faka kuhhavini ubhake imizuzu engamashumi amabili nanhlanu.
Khipha ikhekhe kuhhavini bese ulipholisa imizuzu cishe elishumi ngaphambi kokulibeka kustand sekhekhe noma epuletini.
Uma usulibeka kustand noma epuletini, libeke ulibhekise phansi. Lilinde liphole ngokuphelele ngaphambi kokulihlobisa.
Indlelakwenza (ukhilimu wokuhlobisa)
Endishini encane, faka uphawuda we-Espresso kanye namanzi afudumele bese uhlanganisa ngokusebenzisa imfologo yokudla.
Beka eceleni kuthi ukuphola.
Kwenye indishi, hlanganisa ukhilimu, ushukela, uphawuda weCocoa kanye nengxube ye-Espresso. Sebenzisa umshini kagesi ukuhlanganisa, ngokubeka isivinini maphakathi nendawo, imizuzu ecishe ibe mine.
Hlobisa ikhekhe lakho ngokhilimu bese ufaka nezithelo.
Leli khekhe lizobukeka njengamaBrownies (engathi limanzi maphakathi nendawo). Ungacabangi ukuthi alivuthiwe.
Ngenkathi lisabhakwa kuhhavini lingakhukhumala emaceleni, kungakwethusi lokhu, nokuyinto ebangwa amaqanda. Lizokwehla lapho selipholiswa.
Sbonga Zungu Oct 16, 2020